चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङ नेपाल भ्रमण आउने पक्का महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी « Everestweek – Nepal's Popular Digital NewsPaper
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङ नेपाल भ्रमण आउने पक्का महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी
६ आश्विन २०७६, सोमबार ०९:१४
मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालको एउटा व्यग्र प्रतीक्षाको विषय हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण कहिले ह्ुन्छ ? भन्ने चर्चा नेपाली सञ्चारमा छाएको पनि धेरै समय वित्यो । सञ्चारमाध्यममा मात्र नभएर नेपालीमाझ पनि यो चासोले बढी नै चर्चा पाउने गरेको छ ।
निकै लामो प्रतीक्षापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउने निश्चित भएको पछिल्ला घटनाले संकेत गरेको छ । असोजको अन्तिम सातासम्म सि नेपाल आउने सूचना मुलधारका सञ्चारगृहहरुले सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।
विदेश मामिलाका जानकारहरुका आलेख एवम् विचारहरुमा यो भ्रमणको सम्भावना र स’निश्चितताका अभिव्यक्ति देखिन्छ । उनीहरुका विचार सुन्दा लाग्छ मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल आगमन कहिले होला भन्ने प्रतीक्षाको घडी अब सकिइसकेको छ र उनले निकट भविष्यमै नेपालको भ्रमण गर्न लागेका हुन् ।
गत भदौ २२ मा नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी यहाँ तीन दिन रहनु भयो । यो भ्रमण पनि चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङको भ्रमणको तयारी प्रक्रियाको प्रारम्भका लागि रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अभिव्यक्तिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । नेपाल आएकै दिन विदेशमन्त्री यीले पनि केही नेपाली प्रतिनिधिसँग गर्नु’भएको एक अन्तरक्रियामा भ्रमणको सम्भावनाका बारेमा कुराकानीमा गर्ने बताइएका हुन् । ।
विदेशमन्त्रीको भ्रमण यता राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको चर्चा शिखरमा पुगेको छ । नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा घोषणा नगरे पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले सीको नेपाल भ्रमणको तिथिमिति नै सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यति मात्र नभएर सि नेपाल आएपछि के कस्ता सहयोग, सम्झौता एवम् विकास परियोजनाहरुमा हस्ताक्षर हुनेछ ? भन्ने बारेमा समेत ध्यान तानेको छ ।
केरुङ–काठमाडौँ जोड्ने झोरदेखि जोरभञ्ज्याङ हुँदै नुवाकोट निस्किने सुरुङ मार्गसहितको सडक बनाउने विषयमा सहमति हुने आकलन गरिएको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको औपचारिक प्रक्रियाको सुरुवात हुने भएको छ । केरुङ–काठमाडौँ सुरुङ मार्गसहितको सडक निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहयोग सम्झौता हुन सक्ने अनुमान सर्वत्र गरिएको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भदौ अन्तिम साता काठमाडौँको टोखामा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौँ जोड्ने झोरदेखि जोरभञ्ज्याङ हुँदै नुवाकोट निस्किने सुरुङ मार्गसहितको सडक बनाउने विषयमा सहमति हुने आकलन गरिएको छ ।
त्यसैगरी सोही भ्रमणकै क्रममा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको औपचारिक प्रक्रियाको श’रुआत ह’ने जानकारी पनि उनले दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिबाट भने राष्ट्रपति सी नेपाल आउने निश्चित भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री सिसँगको द्विपक्षीय वार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि वार्ताका क्रममा ‘सीको नेपाल भ्रमणको विषयमा कुरा भएको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक निमन्त्रणामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो । हाल देशमा भएको चर्चा र सरकारको तयारीबमोजिम राष्टपति सिको भ्रमण भयो भने निकै लामो समयपछि मात्र मित्रराष्ट्र चीनका राज्यप्रमुखको नेपाल भ्रमण हुनेछ । २३ वर्ष यता नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति हुनेहुनेछ ।
आसन्न भ्रमण नेपालको लामो प्रतीक्षा भएकाले पनि सहयोग र सम्झौताका विभिन्न विषयमा आवश्यक छलफल, व्यापक चर्चा र तयारीहरु भइरहेको जानकारीमा आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा आएदेखि नै नेपालमा चिनियाँ रेलको एजेन्डाको चर्चा थाल्नु भएकाले पनि यो भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नेबारेमा दुई देशबीच सम्झौता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै केरुङ–काठमाडौँ सुरुङ मार्गसहितको सडक निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहयोग सम्झौता हुन सक्ने अनुमान सर्वत्र गरिएको छ । केही वर्षअघि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएदेखि नै आम नेपाली नागरिकले वैदेशिक बन्द व्यापार तथा आधारभूत आवश्यकताको आपुर्तिका लागि निकासको दोस्रो विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् । दक्षिणतर्फ नेपालको सिमाना खुला र सहज छ । तर व्यवहारमा भने कहिलेकाहीँ जटिलता देखापर्ने गर्छ । जसका कारण आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि दक्षिणतर्फ निर्भर रहन’ परिरहेको वास्तविकताले हाम्रो अर्थतन्त्र मात्र नभएर नागरिकको जीवनलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेको हुन्छ ।
दुई पक्षीय समझदारीमा दुवै देशले एकै पटक नै औपचारिक भ्रमणको मिति सार्वजनिक गर्ने कुटनीतिक परम्पराका कारण सीको भ्रमणको मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन । तर पनि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको हालैको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सीको नेपाल भ्रमणलाई केन्द्रविन्द’मा राखेर छलफलहरु भएको बताइन्छ ।
सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा हुनसक्ने सम्झौता तथा समझदारीमा कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण, किमाथाङ्का र तमोर जलविद्य’त् आयोजना निर्माण, किमाथाङका–जोगबनी राजमार्ग र कोरला भञ्ज्याङ मार्ग निर्माण आदि विषयहरु बढी चर्चामा छन् । तर यसको औपचारिक जानकारी भने नेपाल सरकारले सार्वजनिक रुपमा दिएको छैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले आफू चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउनेमा पूर्ण रुपमा आशावादी रहेको बताएका छन् । उनले कुटनीतिक तह र च्यानलहरुबाट भ्रमणका प्रक्रियाका बारेमा व्यापक तयारी भइरहेको र दुई देशका सरकारहरुले पनि आसन्न भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको स“चना आफुले पाएको बताएका हुन् ।
नेपाल चीनबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै सौहार्दपूर्ण रहँदै आएको र नेपालले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै आएको बताउँदै रिजालले नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार भए पनि एक चीन नीतिप्रति सधैँ अडिग रही आएकाले नेपालको यस नीतिको चीनले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उपप्रमुख रिजालले चीनजस्तो समृद्ध छिमेकका राष्ट्रपतिले यति लामो समयपछि नेपालको भ्रमण गर्ने हाम्रा लागि ठूलो महत्वको विषय हो भन्दै यस भ्रमणका क्रममा नेपालले कनेक्टिभिटीमा नै बढी प्राथमिकता दिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियान जेमिङले नेपाल भ्रमण गनर्’भएको थियो । त्यसयता चिनियाँ राष्ट्रपति तहबाट नेपाल भ्रमण नभएकामा सीको भ्रमण ह’न लागेको हो । त्यसैले पनि यो भ्रमणले बढी चासो र चर्चा जन्माउन’ स्वाभाविकै हो ।
त्यस यताका नेपालका सबै सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल ल्याउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । यस विषयमा नेपालको उच्च राजनीतिक तह र नेपाली सञ्चारले राख्ने गरेका जिज्ञासामा चीनको जवाफ ‘उपय’क्त समयमा नेपाल भ्रमण ह’नेछ’ भन्ने मात्र रह्यो । तर अब भने यो औपचारिक जवाफभन्दा माथि उठेर दुई देशबीचको कुटनीतिक उचाइ ग्रहण गर्ने समय नजिकिएको देखिन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी आधुनिक चीनको विकासमा देङ स्याओ पिङपछिको चर्चामा चिनिनुहुन्छ । चीनको वर्तमान आर्थिक विकासको शिलान्यास देङको ख’ला चीन नीतिलाई मानिएजस्तै चीनलाई अहिले विश्वमा प’¥याउने काम सीको बिआरआईजस्तो बृहत् आयोजना र वर्तमान आर्थिक विकासलाई मान्ने गरिएको छ । यसरी पनि चीनको प्रभाव विश्वको नयाँ नयाँ भ“गोलमा फैलिँदैछ ।
हालैका दिनमा चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा बाक्लिएको छ । विदेशमन्त्रीपछि चीनको विदेश विभागका प्रमुख सङ ताओ यतिखेर नेपालमै हुनुहुन्छ । उनको प्रतिनिधिमण्डल र नेकपाका नेताहरुबीच वैचारिक तथा द्विपक्षीय विविध विषयमा राजधानीमा छलफल हुँदैछ । यस कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपति सीको आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा छलफल हुने नै छ । यसै महीनाको अन्त्यतिर करीब दुई दिन हुने भनिएको आसन्न भ्रमणको तयारीमा दुवै देशका सरकार जुटेको देखिन्छ । र नेपाली नागरिक चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाइ काठमाडौँमा स्वागत गर्न आतुर देखिन्छन् ।